Yiziphi Izinzuzo Zokulekelelwa Kwe-Lactoferrin Zabantu Abadala Nabancane?
Ukubuka konke kwe-Lactoferrin
I-Lactoferrin (LF) yisipho samaphrotheni wemvelo obisini lwe-mamalia futhi sibonisa izakhiwo ezilwa namagciwane. Kusukela yaqala ngawo-60s, kube nezifundo eziningi ukuthola inani lokwelapha le-glycoprotein kanye neqhaza layo ekugomeni.
Yize izingane ezisencane zingathola okungezelelweyo kusuka ukuncela omama bazo, i-lactoferrin powder eyenziwe ngentengiso iyatholakala kuyo yonke iminyaka.
1. Yini iLactoferrin?
I-Lactoferrin (146897-68-9) yi-glycoprotein ebopha i-iron yomndeni wokudluliselwa. Le proteni inothile kuma-antibodies futhi itholakala kubisi lomuntu nasezinkomeni. Ngaphandle kwalokho, kukhishwa imfihlo eminingi yezinto eziphilayo efana nezinyembezi, amathe, uketshezi lwamakhala, ijusi le-pancreatic ne-bile. Umzimba uzokhipha ngokwemvelo i-glycoprotein ngokuphendula isivuseleli sokuvuvukala.
Ngaphambi kokuthi wenze lactoferrin buy, thatha iqabunga ngokusebenzisa lokhu kuphawula ukuze ubone ukuthi isengezo siyakufanele.
Amanani amaningi e-lactoferrin akhona ku-colostrum, okuyi-fluid yokuqala enamathela ngemuva kokuzala. Kuthunyelwa ebisini ngaphakathi kwezinsuku ezimbili noma ezintathu zokuqala ngemuva kokubeletha. Noma ukuvalwa kwe-colostrum sekusondele, amanani abalulekile e-lactoferrin asazotholakala ngobisi oluguqulwayo noluvuthiwe.
Ngakho-ke, ukukhipha kanjani i-lactoferrin kusuka ku-bovine colostrum?
Ngivumele ngikuyise ngenqubo eqondile yokuhlukanisa i-lactoferrin.
Isinyathelo sokuqala kubandakanya ukuhlukanisa u-Whey kubisi. I-Whey yikukhipha okungamanzi okusala ngemuva kokuncipha noma ubisi olujiyile olunenhlanganisela ene-acid. Inqubo yokuhlukanisa yenza ukusetshenziswa kwe-chropatography yokuxhumana kwe-hydrophobic kanye ne-chionat ye-ion-exchange elandelwa ngokulandelana okulandelanayo ngezixazululo ze-saline.
IBovine colostrum ivela ezinkomeni. Ucebile ngamaprotheni, ama-antibodies, amaminerali, amavithamini, ama-carbohydrate kanye namafutha. Lezi zinhlaka ziqinisekisile inani lezokwelapha le-colostrum, yingakho, lidonsa isasazo phakathi kososayensi abasebenza ocwaningweni.
Njengoba kunikezwe ukuthi okuqukethwe kwe-lactoferrin kuncipha njengoba isikhathi sokubeletha sanda, kunconywa umthombo obambele usana. Thatha, ngokwesibonelo, i-LF ejwayelekile ngokushesha nje ngemuva kokuzalwa icishe ibe ngu-7-14mg / ml. noma kunjalo, okuhlushwa kungancipha cishe ku-1mg / ml ngobisi oluvuthiwe.
Uma ufuna ukuphinda ungene kwi-lactoferrin ye-immunological, kufanele ungene ebhange ku-bovine colostrum supplementation.
I-lactoferrin eyenziwe ngobuningi bezentengiselwano ingumkhiqizo we-bovine colostrum. Kodwa-ke, lo mkhiqizo ube yinto ekhathazayo kwabanye abantu okubonakala sengathi banenkinga yokutheleleka ngalesi sifo senkomo esihlanyayo. Ake ngikuqinisekise ukuthi lesisimo asivamile. Ngaphandle kwalokho, ezinye izithasiselo zezinsana ze-lactoferrin zingcaphuno zerayisi eyenzelwe izakhi zofuzo, zithanda abantu abangabekezeleli i-lactose.
2. Kungani usebenzise iLactoferrin Powder njengezengezo, imihlomulo yeLactoferrin?
I-Cutibacterium ne-propionibacterium zibhekene nezinduna eziningi. I-Lactoferrin isebenza ukwehlisa la magciwane nge-iron futhi inciphise imiphumela yawo.
Kwezinye izimo, ama-radicals mahhala kanye nezinhlobo ze-oksijini ezisebenzayo zinomthelela ekulimaleni kwamaseli kanye nokulimala kwe-DNA. Ngenxa yokuxineka oxidative, ukuvuvukala kungenzeka futhi kube nomthelela ekukhuleni kwezinduna. Ngokusho kososayensi abacwaningi, i-lactoferrin iyi-anti-oxidant enamandla, yingakho amandla okulwa nama-radicals mahhala.
Ukuthatha i-lactoferrin eceleni kwe-Vitamin E ne-zinc kuzonciphisa izilonda ze-acne kanye nama-comedones esikhathini esingangezinyanga ezintathu.
Ngaphandle kwalokho, ukuvuvukala kubangela ngqo ukwakheka kwezinduna kanye nama-cysts ngokuxhuma ama-pores. Izici zokulwa nokuvuvukala ze-lactoferrin ziqinisekisa ukuphulukiswa okusheshayo kwezilonda.
Izazi zesikhumba ziyagcizelela eqinisweni lokuthi impilo yakho yezithumbu iyisibonakaliso sesikhumba sakho. Isibonelo, uma ipheshana lakho lesisu livuza noma lingenampilo, ukusebenzisa zonke izinhlobo zamakhilimu obuso noma ama-probiotic asezingeni lomhlaba ngeke akuxazulule ukuvuvukala kwesikhumba, ezemidlalo, noma i-eczema. Ukuthatha i-lactoferrin kuzokhipha amagciwane amancane ayingozi ephepheni lokugaya ngenkathi kugqugquzelwa umsebenzi wento esebenza kahle yeBifidus.
Ngaphandle kokwelapha i-acne, i-lactoferrin yasusa izimpawu ze-psoriasis futhi yasheshisa ukululama kwizilonda zonyawo lwe-neuropathic, esivame kakhulu ezigulini ezinesifo sikashukela.
Ucwaningo oluningi luqinisekisa ukuthi i-Lactoferrin (LN) ivimbela amagciwane, amagciwane, izifo ezibulala amagciwane nezifo zokukhunta ukuhlasela umzimba. ikhemikhali isebenza ngokubopha kulawa magciwane, ngokunika amandla ukwakheka kwamaseli abo, kanye nokuvimba ama-cell receptors.
Ocwaningweni oluthile, ososayensi bakuphawulile lokho lactotransferrin (LTF) yayisebenza kahle ekuvimbeleni igciwane le-herpes kunenguqulo yomuntu. Ucwaningo lwe-in vitro luphinde lukhombise ukuthi lokhu kungezwa kulawula ngempumelelo imiphumela ye-HIV.
Kwimithamo ephakeme kancane, i-lactoferrin isebenza ukuphatha i-virulence ye-Hepatitis C. ngokusho Ucwaningo lwe-Hepatology, lokhu kwelashwa kwandisa ukubonakaliswa kwe-interleukin-18, iprotheni ebhekene nokubuyisa igciwane le-Hepatitis C. Ukuze usebenze kahle kakhulu, iziguli kufanele zithathe cishe amagremu ayi-1.8 kuya ku-3.6 ngosuku lokunikela ngosuku. Isizathu ukuthi imithamo ephansi ye-lactoferrin ngeke yenze mehluko kokuqukethwe kwegciwane.
Kunokuqagela, okubheka i-LF njengokwelashwa kwezifo ze-helicobacter pylori. Lapho ufaka isengezo ngokwelashwa kwakho okujwayelekile kwesilonda, amathuba ukuthi le mishanguzo izosebenza kangcono. Lesi simangalo kube ngumbimbi wethambo phakathi kwabaphenyi njengoba iningi libamba ukuthi ukusetshenziswa kwe-lactoferrin powder kuzobe kungasebenzi uma kungekho imithamo kadokotela.
Ukulawulwa kwe-Iron Metabolism
I-Lactoferrin ngeke ilawule kuphela ukugcwala kwensimbi emzimbeni kepha iphinde inyuse ukumuncwa kwayo.
Kubekhona ucwaningo lomtholampilo oluqhubekayo olwalufuna ukuqhathanisa ukusebenza kwe-LF ne-ferrous sulfate ku-iron defence anemia ngesikhathi sokukhulelwa. Kusukela ekuqulweni kwecala, i-lactoferrin yaba namandla kakhulu ekuvuseleleni ukwakheka kwe-hemoglobin namaseli abomvu egazi.
Abesifazane abadla i-glycoprotein banamazinga aphezulu e-iron anemiphumela emibi engu-zero. I-Lactoferrin isebenza ukunciphisa amathuba okuphuphuma kwesisu, ukuzalwa ngaphambi kokuzalwa, kanye ne-lowweightweight.
Ngakho-ke, kusobala ukuthi siyisengezo esifanele sabomama abakhulelwe nabesifazane beminyaka yokuzala abalahlekelwe yizinsimbi ezithile lapho besezindlini zabo. Ama-Vegetarians kanye nabanikeli ngegazi njalo bangazuza nakwezithako ze-lactoferrin.
I-Healthy Gastrointestinal Tract
I-Lactoferrin baby supplement detoxifying futhi igcina isisu siphilile. Isusa amagciwane ayingozi, abhekele ukuvuvukala. Isibonelo, la magciwane abanga iningi lamacala we-gastroenteritis ne-enterocolitis, alimaza izindonga zamathumbu eziholela ekufeni ngaphambi kwesikhathi. Uma ngasizathu simbe, ingane yakho ayinceli, kunconywa kakhulu ukuthi uye ku-bovine lactotransferrin (LTF).
3. Izinzuzo zeLactoferrin Enganeni
I-Lactoferrin baby supplement iphazamisa ukukhula kwama-microorganic emathunjini wezingane ezisanda kuzalwa. La magciwane abandakanya i-Escherichia coli, iBacillus stearothermophilus, Staphylococcus Albus, uCandida albicans, noPseudomonas aeruginosa. Izifundo eziningana zisekela iqiniso lokuthi ukudla nsuku zonke i-lactoferrin supplement kunciphisa amathuba we-gorroenteritis ye-Noroviral ezinganeni.
Namanje esiswini, i-LF ikhuthaza ukwanda kwamaseli we-endothelial ngenkathi iveza ukukhula kwama-follicle we-lymphatic. Ngakho-ke, kuba sobala ukuthi ukungezelelwa kwe-lactoferrin kungaba umuthi wokulimala kwamathumbu owonakele.
Ukuncelisa amabele kungumthombo oyinhloko we-iron neonates. Kodwa-ke, odokotela bezingane batusa ukuthi ukungezelelwa okwengeziwe kwensimbi kuyadingeka ngoba ubisi lwebele luqukethe amanani amancane ale mineral.
Ngivumele ngichaze ukuthi kungani i-LF iyisengezo esifanele kwizingane ezizalwa ngaphambi kwesikhathi nezinsana ezizalwe zinesisindo esiphansi. Imvamisa, leli qembu lihlaselwa kakhulu yi-anemia yokuntuleka kwe-iron. Ukulawula isengezo sengane ye-lactoferrin kuzonyusa i-hemoglobin namaseli abomvu egazi ohlelweni lojahidada. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lwembula ukuthi i-iron supplementation ikhuthaza ukukhula kwengqondo kwengane.
Kwesinye isikhathi, amagciwane alimazayo afana ne-E.coli adla ku-iron ekhona emgodini wamathumbu we-neonatal. Ukuthatha i-lactoferrin kuzoncisha amagciwane e-iron futhi uwaqothule ngenkathi uqinisekisa ukuthi umgcini uthola wonke amaminerali atholakalayo.
I-LF idlala indima enkulu ekwakheni amasosha omzimba engane. Okunye kwalokhu ukusetshenziswa kwe-lactoferrin powder kufaka phakathi ukwanda komsebenzi wama-macrophages, ama-immunoglobulins, amaseli we-NK, nama-T lymphocyte, anecala lokungazweli kwe-neonatal. Ngaphezu kwalokho, ukuphatha i-LF kunciphisa ukuthambekela kwama-allergen.
4. Lactoferrin Ilithuthukisa Kanjani Uhlelo Lokugonywa?
Mediates phakathi kwe-Adaptive ne-Innate Immune Imisebenzi
Ngempendulo ye-immune yangaphakathi, i-lactoferrin isebenza ngezindlela eziningi. Isibonelo, kuthuthukisa imisebenzi yamangqamuzana omzimba wokubulala (i-NK) nama-neutrophils. Iprotheni ikhuthaza i-phagocytosis futhi ibangele ukwanda kwama-macrophages.
Ngempendulo eguqukayo, izinsiza ze-LF ekushintsheni kwama-T-cell ne-B-cell. Endabeni yokusayina kokuvuvukala, womabili amasimba omzimba angaphakathi nokuzivumelanisa nawo angahlangana ukumelana nokwenzeka.
I-Lactoferrin ilawula ukukhiqizwa kwama-cytokines we-pro-inflammatory kanye ne-interleukin 12, ekhombisa izakhiwo ezivikelayo ngokumelene nama-pathogen entracellular.
I-Mediates ku-Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)
Indima i-lactoferrin powder ekucindezeleni izinhlobo ze-oksijini ezisebenzayo (i-ROS) bekulokhu kubalulekile ekutadisheni okuhlobene nokulimazeka nokuthuthukiswa komdlavuza. Ukwanda kwe-ROS kuhumusha engcupheni ephezulu yezimo zokuvuvukala ngenxa ye-apoptosis noma ukulimala kwamaselula.
Ukuzivikela Ngokumelana Nezifo Ezincane
Izici zokulwa ne-microbial ze-lactoferrin zinqamula kuwo wonke amagciwane, amagciwane, amagciwane kanye nezifo zokukhunta.
Ama-Microbes achuma futhi ancike kunsimbi yokukhula nokusinda. Lapho behlasela umgcini, uLF unciphisa amandla abo okusebenzisa i-iron.
Ngesikhathi sesigaba sokuqala sokutheleleka, ama-lactoferrin (LF) angenela ukulwa nethonya langaphandle ngezindlela ezimbili eziqondile. Amaprotheni azovimba ama-receptors amaselula noma abophe kunegciwane, ngenxa yalokho, avimbele ukungena kwawo kumgcini. Ezinye izinto ezilwa ne-microbial ze-lactoferrin zifaka ukubekezela indlela yeseli le-pathogen noma ukuvimba umzimba wabo we-carbohydrate metabolism.
Izifundo eziningana zilawula ukusetshenziswa kwe-lactoferrin powder ekuphathweni kwegciwane leHerpes, ukutheleleka nge-HIV, i-hepatitis Human ne-B, umkhuhlane kanye ne-hantavirus. Ngaphandle kwalokho, isengezo sithintele ukwanda kwe-alphavirus, i-rotavirus, i-papillomavirus yabantu, nabanye abaningi.
Kwezinye izimo, i-Lactoferrin ingahle ingakhiphi konke ukutheleleka kepha ungaqiniseka ukuthi izonciphisa ubunzima bomthwalo wegciwane okhona. Ezifundweni ezedlule, i-LF ibisebenza ngempumelelo ekunqandeni i-Sse pseudovirus. Njengoba i-Sars-CoV-2 iwela esigabeni esifanayo ne-SARS-CoV, kungenzeka ukuthi i-lactoferrin inganciphisa ukubikwa kwe-COVID-19.
Yize ama-medics abamba ukuthi ukukhuphula amandla omzimba wakho kungavikeli i-coronavirus eyodwa, ukungezelelwa kwe-lactoferrin kuzosiza ekulweni. Ngemuva kwakho konke, abasebenza ngokufanayo babonile ukuthi asebekhulile nabantu abanokuzivikela okuphansi basengozini enkulu yokuthola inkontileka ye-COVID-19.
5. Ukusetshenziswa kweLactoferrin Powder Ukusetshenziswa kanye nokusebenza
I-Lactoferrin bulk powder iyatholakala kososayensi nabacwaningi abafuna ukuthola inani layo lokwelapha emzimbeni womuntu. Inamathuba amaningi okubanzi okuvimbela izifo, izithasiselo zokudla okunempilo, ukudla kanye nama-antiseptics wezemithi, nezimonyo.
Ekuhlaziyeni kwakho kanye nokuhlolwa kwelebhu, qiniseka ukuthi uthola umthombo wezakhi kusuka kubahlinzeki be-lactoferrin abavumelekile.
I-Lactoferrin powder sebenzisa ku impuphu yobisi lwezingane
Ifomula ye-infant powder ithuthuka ngokuqhubekayo ibhekise ekuboniseni i-biochemistry yobisi lwebele langempela oluvela kumama. I-Lactoferrin yiprotheni eningi kakhulu kunobisi lwebele lukamama. Kuyathandwa ngokuletha zonke izinhlobo zezinzuzo enganeni kufaka phakathi ukubopha insimbi yokugomela, ukuvikela umdlavuza, kanye nokukhuthaza amathambo anempilo phakathi kwabanye.
ILactoferrin igcwele ingxenye yobisi lukamama wokuqala obizwa nge- colostrum. IColostrum iqukethe cishe kabili isisindo semililitha elilodwa ngobisi lwebele oluvuthiwe. Lokhu kusho ukuthi izingane ezisencane kunazo zonke zidinga ukujulwa okuphezulu kwe-lactoferrin ukuze ikhule kahle.
Ukuthuthukiswa komzimba wamasosha omzimba kusekelwa yingxenye yeLactoferrin esesimweni sosana. Amaprotheni enza umsebenzi obalulekile kumasosha omzimba ezinsana futhi amelela uhlelo lokuqala lokulwa ne-anti-virus kanye ne-anti-virus. Umphumela obalulekile we-anti-microbial ulethe kakhulu nge-iron-ions chelation, ebaluleke kakhulu ekukhuleni kwegciwane. Ngaphandle kwalokho, i-lactoferrin nayo ikholwa ukuthi isebenze njenge-antioxidant engaqinisa impendulo yokuzivikela komzimba ngokunika amandla umehluko, ukuqina, kanye nokwenza kusebenze amaseli omzimba.
6. Imiphumela yeLideoferrin Side
Ukuphepha kwama-LF pivots ezintweni ezimbalwa.
I-Lactoferrin ngobukhulu imithamo ingaba chances. Isibonelo, lapho isengezo sivela ubisi lwenkomo, ungasisebenzisa ngokuqiniseka ngamanani aphezulu unyaka. Kodwa-ke, lapho umkhiqizo uvela elayisi, amathuba wokuthi ukulandelana ngokweqile kwamaviki amabili kuzothuthukisa okuthile okulimazayo.
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-lactotransferrin (LTF) ifaka phakathi;
Ngokungafani nezithako eziningi zokwelapha, i-lactoferrin iphephile kumama abakhulelwe nabancelisayo.
Ukudlula emiphumeleni emibi ye-lactoferrin, kunconywa umthamo ophakathi kuka-200mg no-400mg. Kufanele uyithathe izinyanga ezimbili kuya kwezintathu zilandelana. Ezimweni ezingavamile, isikhathi singakhuphuka size sifinyelele ezinyangeni eziyisithupha.
7. Ubani Ongazuza kuLactoferrin?
I-Lactoferrin izuzisa umama nosana.
Ngesikhathi sokukhulelwa, ukuphatha lokhu kuhlanganiswa kuzoba nomthelela omuhle osayizi be-fetus nesisindo sayo sokuzala. Uma umama eqhubeka nomthamo we-lactoferrin ngesikhathi sokukhulelwa, ukukhiqizwa kwakhe kobisi lwebele kuzothuthuka kakhulu. Ngaphandle kwalokho, ingane ibingaqhosha ngokungaqondile ku-colostrum ukuze ilondoloze isisindo somzimba esinempilo.
Izinsana kanye nezingane ezisencane ezingancelwanga amabele noma ezixubile
I-lactoferrin isiza ukuqinisekisa ukuthi usana luba nesistimu enamandla yokuzivikela ngenkathi ivikela ipheshana elisobala emathunjini. Ngaphandle kwalokho, isengezo sisebenza njenge-laxative, sisiza ekuhambeni kwamathumbu okuqala kwengane. Amafomula ezinsana acebile ku-colostrum ayatholakala kusuka kubahlinzeki be-Lactoferrin be-Powder basekhaya nabaku-inthanethi.
I-Iron Defence Anemia
I-Lactoferrin supplement iphakamisa kakhulu amazinga e-hemoglobin, amangqamuzana abomvu egazi, ne-ferritin. Yize abantu abaningi basebenzisa i-ferrous sulfate ukumelana nokushoda kwe- iron, ucwaningo oluningi luqinisekisa ukuthi i-lactoferrin inamandla amakhulu.
Uma ungumuntu onemifino noma onikela njalo ngegazi, uzodinga ukudla okune-iron okwenzela amazinga e-hemoglobin aphansi kanye ne-ferritin. Ngaphandle kwalokho, ungenza i-lactoferrin enhle ithenge kubathengisi be-inthanethi.
Abantu abane-Low Immunity
I-Lactoferrin ivikela umzimba ezifweni ezingamagciwane ngokuxosha amagciwane athelelekayo futhi ivimbele ukwanda kwamagciwane namagciwane. Isakhiwo sibandakanyeka kakhulu ekushintsheni kwemigwaqo yokusayina ebhekele ukuqapha izimpendulo zomzimba zomsingathi.
I-Lactoferrin isebenza njengomlamuleli, ibopha futhi ixhumanise ukuxhumana phakathi kwemisebenzi yokuzivikela eguqukayo neyangaphakathi. Isibonelo, ithuthukisa imisebenzi ye-phagocytic ngokukhipha ama-neutrophils nama-macrophage. Kuwo amasosha omzimba avumelanayo, leli khompiyutha lisheshisa ukuvuthwa kwama-T-cell nama-B-cell, okubonisa ukungazweli kwe-cell-Mediated and humoral, ngokulandelana.
8. I-Lactoferrin ene-IgG
Njenge-lactoferrin, I-IgG noma i-immunoglobulin G yiprotheni elwa nokulwa namagciwane osobisini lwebele.
Izifundo eziningana ziyatholakala ukuchaza ukuhlangana phakathi kwe-lactoferrin ne-IgG.
Iqoqo le-lactoferrin ku-colostrum liphakeme kakhulu kunele-IgG. Ngokusho kososayensi abacwaningi, izici eziningana zithinta inani la maprotheni obisini.
Isibonelo, zombili i-lactoferrin ne-IgG zizwela ukushisa nokubandlulula. I-Immunoglobulin G ingamelana nokwelashwa okushisa okufika ku-100 ° C kodwa kube kancane imizuzwana embalwa. Ngokuphambene nalokho, i-lactoferrin incipha kancane ngokukhuphuka kwezinga lokushisa kuze kube yilapho ichitheka ngokuphelele ku-100 ° C.
Ngokusekelwa kulamaphuzu, kufanele ukuthi ubonile ukuthi isikhathi kanye nokushisa okushisa kungukucatshangwa okuyinhloko lapho kusetshenzwa ubisi lwe-neonatal. Kusukela ukunqotshwa kobisi kuqale impikiswano, abantu abaningi bazimisele ukuwaqandusela.
Ukuhlushwa kwe Lactoferrin (146897-68-9) isisencotsheni yayo ngemuva kokubeletha. Lapho isikhathi sangemva kokubeletha sanda, le proteni iyancipha kancane kancane, mhlawumbe ngenxa yokuncipha kwe-colostrum. Ngakolunye uhlangothi, ukuwa kwamazinga e-immunoglobulin G cishe akunandaba nayo yonke inkathi yokuqunjelwa.
Kodwa-ke i-lactoferrin eningi ilahla ubisi lwe-mamalia, ukuqina kwayo kusazokuphakama kakhulu kunokwe-IgG. Leli qiniso lisemi noma ngabe liku-colostrum, ngokwesikhashana, noma ubisi oluvuthiwe.
I-Yamauchi, K., et al. (2006). I-Bovine Lactoferrin: Izinzuzo kanye ne-Mechanism of Action Against ukutheleleka. I-Biochemistry ne-Cell Biology.
UJeffrey, KA, et al. (2009). I-Lactoferrin njenge-Natural Immune Modulator. Umklamo wamanje weMithi.
ILepanto, MS, et al. (2018). Ukusebenza Kokulawulwa Kwemlomo kwe-Lactoferrin ekwelashweni kwe-Anemia kanye ne-Anemia of Ukuvuvukala Kwabesifazane Abakhulelwe Nabangazithwele: Ucwaningo Olungenelayo. Imingcele e-Immunology.
IGoldsmith, SJ, et al. (1982). I-IgA, IgG, IgM ne-Lactoferrin Okuqukethwe Ubisi Lomuntu Ngenkathi Kuqala Ukuqothuka Nomthelela Wokucubungula Nokugcina. Ijenali Yokuvikelwa Kokudla
USmith, KL, Conrad, HR, noPorter, RM (1971). I-Lactoferrin ne-IgG Immunoglobulins evela kwa-Bovine Mammary Glands. Ijenali Yesayensi Yobisi.
Sanchez, L., Calvo, M., kanye no Brock, JH (1992). Indima Yebhayoloji yeLactoferrin. Izingobo Zokugcina Izifo Ebuntwaneni.
Niaz, B., et al. (2019). I-Lactoferrin (LF): I-Natural Anti-Microbial Protein. I-International Journal Yezindawo Zokudla.